Ama-Archives Wokuvakasha Kwezitimela | ikhasi 6 ka 14 | Londoloza Isitimela
Isigaba: Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela
Amathiphu Ukuze Okuhambayo ngu Isitimela Kids EYurophu
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi Unokuthula futhi kujabulise. Amagama amabili ongawezwa abazali besebenzisa lapho betshela izindaba zabo zokuhamba ngamaholide nezingane. Ngakho, sinqume ukukunikeza amathiphu abaluleke kakhulu wokuhamba ngesitimela nezingane eYurophu. There is just something about trains that calms children…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Europe ugcwele UNESCO amasayithi ukuheha izigidi zezivakashi. Kukhona ezihlukahlukene izindawo ongazibona - kusuka esikhumbuzo yezakhiwo kanye namasiko ukuze izimangaliso zemvelo we Izwekazi Old. Nge ezindaweni eziningi kangaka ongakhetha kuzo, it can be difficult for…
Iyini I inzuzo enkulu zemininingwane Amathikithi Online?
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Ihlobo engqongqoza iminyango nabantu uhlela ukuchitha epholile ehlobo iholide ezindaweni ezahlukene. Ukubhukha lamathikithi akho isitimela kungaba ezinzima njengoba kuzoba khona omude futhi uma ufuna enye ezithakazelisayo…
Ukujabulela I-Yecala-Mahhala Trip: Ihostela Indawo
ngu Karina Santos
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi Emahostela baye baba rap embi ngokuba ezingcolile, dim, futhi stinky. Kepha bewazi ukuthi amahostela manje athuthukisiwe? Kulabo abazi ukuthi yini amahostela kukhona, asizange nje siphuthe igama elibi futhi sigijime nalo. Emahostela kukhona indawo yokuhlala eshibhile…
The Best Awezamapaki okuzithokozisa EYurophu
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi Uma ungenaso isiqiniseko zazo amapaki ezokuzijabulisa eYurophu kukhona okungcono, ke ubhekisise. Lesi sihloko uhlu ezinye zezindawo ezingcono kakhulu amapaki ezokuzijabulisa ungavakashela eYurophu manje! Sizokunikeza izincazelo ezinemininingwane ngayinye nokuthi…
Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe
Yenza ukuphila kwakho kube lula Nge Gcina Isitimela
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Ngingu umhambi okhuthele futhi nalokho isihambi solo. Into engcono mayelana nalesi nenhlalakahle ukuthi uthola ukubona umhlaba futhi ungenayo ukulinda ukuze noma ubani zokwazi khulula bese uhlela uhambo futhi uthathe zesimanje zabo zibe…
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi Ingabe wena uthanda ehamba ngesitimela? Ingabe wena uthanda ukubona izinqaba okumangalisayo emazweni afana no-Fulansi? Uma kunjalo, ke Usufike endaweni efanele. Lokho kungenxa yokuthi lesi sihloko “10 Charming Izinqaba EFrance ngu zemininingwane” uzokunika uhlu eqondile…
Izikhangibavakashi To The Black Forest Germany
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Kulabo abazi ukuthi banayo kakade, Black Forest iyindawo enkulu esifundeni ezinamahlathi e eningizimu-ntshonalanga Germany. Ngini ngokuqondile, ukuthi etholakala isimo Baden-Württemberg futhi ithatha ingxenye enkulu kakhulu-ke. Ngaphezu kwalokho, esifundeni ivuliwe umngcele waseFrance naseSwitzerland, so it’s accessible…
Qeqesha Ukuhamba Germany, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe